ညီမဖြစ်သူ သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး - Cele Gabar
ပရိသတ်ကြီရေ ဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ သဉ္ဇာကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုကလည်း အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေခဲ့ပြီး မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကို ရပ်တည်နေတဲ့သူပါ။
သဉ္ဇာကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင်တာ အချိန်မကြာသေးပေမဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကိုပါရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ(၁၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ညီမလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် “Happy birthday my lovely sis Thinzar. လိုအင်ဆန္ဒတွေအမြဲပြည့်ပါစေ။ ငပိန်းမလေး” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံလေးကနေစလို့ လက်ရှိအချိန်ထိ နှစ်ယောက်တူတူရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ ဆုတောင်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ညီမျဖစ္သူ သၪၨာရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးအတြက္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ပရိသတ္ႀကီေရ ဝါဆိုမိုးဦးနဲ႔ သၪၨာကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အႏုပညာရွင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝါဆိုကလည္း အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာတစ္ခုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အထိကိုေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနခဲ့ၿပီး ေမာ္ဒယ္လ္သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကို ရပ္တည္ေနတဲ့သူပါ။
သၪၨာကလည္း အႏုပညာအလုပ္ေတြကို စတင္လုပ္ကိုင္တာ အခ်ိန္မၾကာေသးေပမဲ့ အမာခံပရိသတ္ေတြကိုပါရရွိပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ သၪၨာရဲ႕ ေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝါဆိုကေတာ့ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ညီမေလးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ “Happy birthday my lovely sis Thinzar. လိုအင္ဆႏၵေတြအၿမဲျပည့္ပါေစ။ ငပိန္းမေလး” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးထားခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ငယ္ဘဝပုံေလးကေနစလို႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေယာက္တူတူ႐ိုက္ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြကိုလည္း မွ်ေဝေဖာ္ျပထားခဲ့ပါေသးတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ သၪၨာရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြ ဆုေတာင္ေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ရိုက်ကွင်းကိုမုန့်ကားပို့ခဲ့တာကြောင့် Song Hye Kyo နဲ့မင်းသား Jung Kyung Ho တို့ကြားကရင်းနှီးတဲ့ခင်မင်မှုကိုသိသာစေခဲ့
Next post ဒီနေ့မှာ အသက် (၅၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူ